I-Society of Wetland Scientists (SWS) ihlonipha ubumfihlo bamalungu ayo nezinye izivakashi kwiwebhusayithi yayo. I-SWS ikholelwa ngokuqinile ukuthi uma ezohwebo ze-elekthronikhi nemisebenzi ye-intanethi kufanele ikhule, abathengi kumele baqiniseke ukuthi ulwazi oluhlinzekwe ku-inthanethi lusetshenziswa ngokuziphendulela nangokufanele. Ukuvikela ubumfihlo be-intanethi, i-SWS ifake inqubomgomo elandelayo.
Ukwaziswa Kanjani Ukuqoqa?
Iningi le-SWS leqoqo leqoqo lisetshenziselwa kuphela ukusisiza kangcono ukukhonza amalungu ethu. Inqubomgomo yethu jikelele ukuqoqa nokugcina ulwazi lomuntu siqu amalunga ethu nezivakashi zethu ezihlinzeka ngokuziwayo. Uma izinqubomgomo zethu zobumfihlo ziguquka, sizokwazisa bonke abasebenzisi nge-imeyili noma isimemezelo esikhethekile esibekwe kuwebhu.
Kusuka Kubasebenzisi Bonke. I-SWS ayiqoqa noma yiluphi ulwazi lomuntu siqu kusuka kubasebenzisi abaphequlula iwebhu yayo. Idatha ehlanganisiwe kuphela - njengenombolo ye-hits ekhasini ngalinye - iqoqwe. Idatha ehlanganisiwe isetshenziselwa kuphela izinhloso zangaphakathi nokukhangisa futhi unganikeli ngolwazi oluqondene nomuntu siqu.
Kusuka kumalungu e-SWS, ababhalisi beNkomfa, nabanye abathengi. Ukuthola izinsiza kuphela-izici kanye nezici zokwenza umuntu ku www.sws.org nezinye izindawo amalungu kanye nabanye abasebenzisi bacelwa ukuba babhalise futhi banikeze ulwazi olulinganiselwe. Lolu lwazi luhanjiswe ngokuzithandela. SWS ibuza abasebenzisi ukuthi banikeze igama labo, inombolo yelungu (ngamalungu), igama lenhlangano, ifoni yebhizinisi, ne-e-mail. Ukwaziswa okufanayo kungathunyelwa ku-SWS ngokusebenzisa izinhlelo zobulungu, ukubhaliswa kwengqungquthela noma imicimbi, imiyalo yokushicilela, nokubhaliselwa., Ngaphezu kwalokho, kwezinye i-imeyili ezithunyelwe ngefomethi ye-HTML nge-SWS kumalungu ayo ngokusebenzisa izinsiza zayo kanye nezindaba ze-elektroniki, sizoqoqa ngqo ulwazi mayelana nokuthi umamukeli wenzani ngaleyo imeyili. Kulawo ma-imeyili, i-SWS izoqapha ukuthi ngabe umamukeli wabuyela kanjani ngokuya kumxhumanisi anikezwe emlayezo. Olunye ulwazi oluqoqwe ngalesi sici sokulandelela luhlanganisa: ikheli le-imeyli yomsebenzisi, usuku nesikhathi 'sokuchofoza' komsebenzisi, inombolo yomlayezo, igama lohlu lapho umlayezo uthunyelwe khona, inombolo yokulandelela i-URL kanye nekhasi elikuyo. I-SWS isebenzisa kuphela lolu lwazi ukuthuthukisa imikhiqizo yalo nokusabalalisa wale mikhiqizo kumalungu ayo. Lolu lwazi aludayiswa noma lusatshalaliswa nganoma iyiphi enye indlela.
I-SWS isebenzisa kanjani idatha eqoqwe?
I-SWS isebenzisa ulwazi ngokuzithandela oluhanjiswe ngamalungu nakwamanye amakhasimende ngezindlela ezilandelayo:
Imisebenzi Yelunga le-SWS nemikhiqizo. Ngokuvamile, i-SWS kanye nezinsizakalo zayo eziqondile zisebenzisa idatha eqoqwe ukuthuthukisa okuqukethwe kwewebhu yayo; ukuphendula izithakazelo zezivakashi, izidingo kanye nezintandokazi; futhi ukuthuthukisa imikhiqizo namasevisi amasha.
Ukudalulwa Kwezingxenye Zesithathu. Ngesinye isikhathi, i-SWS ingase inikeze idatha elinganiselwe kubantu besithathu abahlinzeka ngemikhiqizo namasevisi. Lezi datha ezinomkhawulo zifaka amagama, izihloko zomsebenzi, izinkampani namakheli ebhizinisi, kodwa ungafaki izinombolo zefoni zebhizinisi, izinombolo zefeksi zebhizinisi noma amakheli e-imeyili.
Isibopho sokusebenzisa Ulwazi lomuntu siqu. Ngezinhloso zeMithetho Yokuvikelwa Kwemininingwane i-1984 ne-1998 (esebenzayo), i-SWS noma amanxusa ayo kumele agcine, ahambele futhi asebenze ngolwazi (kufaka phakathi imininingwane yomuntu) ehlinzekwa nguMsebenzisi lapho ebhalisa kuleWebhu. I-SWS ingathumela i-dta enjalo ngaphandle kwe-European Economic Area yokucubungula. Uma uhlala e-European Union, sicela ubonise imvume yakho ukuthi ulwazi lomuntu siqu olunikezile lungadluliselwa futhi lugcinwe emazweni angaphandle kwe-EU, kufaka phakathi i-United States. Izimpahla zomsebenzisi njengoba kuchazwe ngenhla uma ubhalisa kwiWebhusayithi ukuze uvumele i-SWS (noma izithunywa zayo ezikhethiwe) ukuba zisebenzise ulwazi ukuthumela umkhangisi we-imeyli ongeke ucele, ukukhushulwa, nokuncenga kwemikhiqizo namasevisi wesithathu.
Ulwazi lwekhawunti yekhadi lesikweletu. I-SWS ayidalula ulwazi lwe-akhawunti yekhadi lesikweletu olunikezwa amalungu ayo namakhasimende. Uma amalungu namakhasimende akhetha ukukhokha besebenzisa amakhadi abo esikweletu, i-SWS ithumela ulwazi oludingekayo ukuze uthole ukukhokhelwa endlini yokuhlanza efanelekile.
I-SWS isebenzisa kanjani amakhukhi?
Amakhukhi amafayela aqukethe ulwazi oludalwe yisiphakeli sewebhu olungagcinwa kwiDiskhi yomsebenzisi yomsebenzi okusetshenziselwa ukusetshenziswa noma phakathi kwesikhashana esithile ("i-per-session" cookie) noma ukusetshenziswa kwesikhathi esizayo (i "cookie" eqhubekayo). I-SWS isebenzisa amakhukhi kuphela ukwenza lula umsebenzi ozenzakalelayo, ukugcina nokulandelela amaphasiwedi, ukunquma ukucela okufanele, nokubuyekeza amaphethini wokuhamba. Amakhukhi awasetshenziswanga ukusakaza ulwazi olubalulekile mayelana nabasebenzisi phezu kwe-intanethi noma ukuhlaziya noma yiluphi ulwazi abasebenzisi abanikeza ngokungazi noma abangazi. Uma umsebenzisi ebhalisa, uhlelo luzobuza ukuthi ngabe umsebenzisi uyavuma yini okunamathiselwe kwekhukhi. Abasebenzisi bangase bafundise iziphequluli zabo ze-intanethi ukuphuma ngaphandle kokwamukela i-cookie "ephikisanayo" bese kunalokho bamukela kuphela "i-cookie" ye-"per-session" kuphela, kodwa kuzodingeka ukuthi bangene ngemvume njalo lapho bevakashela isayithi ukuze bajabulele izinzuzo ezigcwele. Uma umsebenzisi enqaba okunamathiselwe kwanoma iyiphi ikhukhi, umsebenzisi angase angakwazi ukufinyelela izinzuzo ezigcwele zewebhusayithi. Ukubhalisa kwenza isayithi libe kangcono ukunquma izindawo zentshisekelo yomalungu futhi inikeze ulwazi olufanele kakhulu.
Yiziphi Izinkinga Zobumfihlo Eziphakanyisiwe Nezixhumanisi Kwamanye Amasayithi?
Leli sayithi liqukethe izixhumanisi kwamanye amawebhusayithi. I-SWS ayikwazi ukulawula futhi ayiyona inomthwalo wemigomo yobumfihlo noma okuqukethwe kwalezo zingosi.
Iyini Inqubo Yokulungisa Ukutholakala?
Uma ngabe umsebenzisi osolwa nge-SWS uye waphatha imininingwane yakhe ngendlela engahambisani nalesi sitatimende sobumfihlo, sicela uxhumane nathi nge-e-mail kubulungu@sws.org.